တင်သားကျစ်လျစ်လှပစေမယ့် (၁၀) မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းများ - For her Myanmar
တစ်နေ့တာမှာ အချိန် ၁၀ မိနစ်လေး ပေးလိုက်ရုံလေးနော်…
တင်းရင်းကျစ်လျစ်တဲ့ တင်ပါးလှလှလေးကို ရဖို့ဆိုတာ လူတော်တော်များများ လိုချင်တဲ့အရာပါ။တချို့ကလည်း အဆီပိုတွေရှိပြီး တင်ပါးက ပုံပျက်နေလို့ စိတ်ညစ်ရသလို တချို့ကလည်း တင်ကို မရှိလို့ စိတ်ညစ်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ သိပါသလား? ကြွက်သားတက်ပြီး အဆီပိုမရှိ၊ တင်းရင်းတဲ့ တင်ပါးတစ်စုံကို အိမ်မှာ လေ့ကျင့်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေ…
ဒီအတွက် ယောင်းတို့ လိုအပ်တာက exercise map တစ်ခု နဲ့ အချိန် ဆယ်မိနစ် ပါပဲ။Victoria Secret model တွေလို တင်ပါးလုံးလုံးလေး ဖြစ်ဖို့ ထိရောက်မှန်ကန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မိနစ်ပိုင်းလေး အချိန်ပေးရုံနဲ့ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နာမည်ကျော် fitness ဆရာမ Rebecca Louis က ပြသထားပါတယ်။
ကဲ…ကြာချိန်က ဆယ်မိနစ်တည်းမို့ လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်……
(1) Hamstring Curl and Press (30 seconds)
ဒါကတော့ တင်ပါးအောက်နားက Hamstring ကြွက်သားတွေကို အဓိက ထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။
Hamstring muscles ရှိ တဲ့ နေရာ လေး တွေ ပါ
Hamstring ကြွက်သားတွေဟာ အဆီပို မရှိတဲ့ တင်ပါးတစ်စုံကို ရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအရ ဝမ်းလျားမှောက်အနေအထားမှာ ပုံထဲကလို ခြေထောက်ကို ချလိုက်၊ မြှောက်လိုက် လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Hamstring ကြွက်သားတွေ လှုပ်ရှားသွားပြီး တင်ပါးနေရာကို သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
(2) Keeling leg lifts (1 minute)
ခြေထောက်တစ်ဖက်က ဒူးထောက်ပြီး နောက်ထပ် ခြေထောက်ကို မြှောက်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ ဒူးထောက်ထားတဲ့ အနေအထားမှာ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အပြင်ထုတ်ပြီး အမြင့်ကြီးကို မမြှောက်ဘဲ အထက်၊အောက် လှုပ်ရှားပေးနေရပါမယ်။ အထက်၊ အောက် လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ Glute လို့ ခေါ်တဲ့ တင်ပါးကြွက်သားတွေကို ဖျစ်ညစ်ထား/ကျုံ့ထား ရပါမယ်။
အနေအထားမှန်ဖို့အတွက် ကျောကို မရမ်းမကွေးဘဲ လက်မောင်းကို တင်းတင်းထောက်ထားရပါမယ်။။ ဒါဟာ Gluteus muscle တွေကိုဦးတည်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်ကို စက္ကန့် ၃၀ စီပါ။
(3) Fire Hydrant kicks (1 minute)
Kicks ဆိုတဲ့ အတိုင်း ကန်ရမှာတော့ ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒါကတော့ outer glute လို့ခေါ်တဲ့ အပြင်က တင်ပါးကြွက်သားတွေကို ဦးတည်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး core muscle တွေကိုလည်း တင်းရင်းစေပါတယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ထုတ်၊ ဘေးကို ကား၊ ပြီးရင် ဆန့်ကျင့်ဘက် ဦးတည်ချက်ကို ကန်ထုတ်ရပါမယ်။ တစ်ဖက်ကို စက္ကန့် ၃၀စီပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတုန်းမှာ gluteus muscle တွေကို ကျုံ့ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်..
Related Article >>> တစ်နေ့ကိုမိနစ်(၂၀)အချိန်ပေးရုံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအချိုးညီညီအဆီကျသွားစေမယ့် နည်းလမ်း(၄)သွယ်
(4) One legged Glute Bridge (1 minute)
Glute bridge လေ့ကျင့်ခန်းဟာ Hamstringနေရာ နဲ့ တင်ပါးကြွက်သားနေရာက အဆီပိုတွေ လောင်ကျွမ်းဖို့ ဦးတည်ပါတယ်။ မျက်နှာကြက်ကို မျက်နှာမူ၊ ကြမ်းပြင်ပေါ် ကို လှဲချပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်မှာ သေချာ ဆန့်တန့်ထားပါ။ ပြီးရင်တော့ ဒူးတစ်ဖက်ကို ကွေးထားပြီး နောက်တစ်ဖက်ကို အပြင်ထုတ်ကာ တင်ပါးကို မြှောက်လိုက်၊ ချလိုက်လုပ်ရပါမယ်။
တင်ပါးမြှောက်နေတဲ့အခါ တင်ပါးကြွက်သားတွေကို တစ်စက္ကန့်လောက် ဖျစ်ညစ်ပြီးမှ အောက်ကို ချပါ။ အနေအထားမှန်ဖို့ အတွက် ကျောပြင်ကို ကွေးခြင်း ကောက်ခြင်းမရှိဘဲ တည့်တည့်မတ်မတ်ဖြစ်နေဖို့ သတိထားရပါမယ်နော်။ တစ်ဖက်ကို စက္ကန့် ၃၀ စီပါ။
(5) Ins and Outs (1 minute)
ဒါကတော့ ပြင်ပက တင်ပါး ကြွက်သားအပြင် သူ့နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပေါင်ရဲ့ ပြင်ပကြွက်သားတွေကိုပါ အချိုးအစား ပြေပြစ်ဖို့ ဦးတည်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘေးဘက်စောင်းပြီး ခြေထောက်ကို V ပုံစံ ကွေးထားပေးပါ။ ပြီးရင် တစ်ဖက်စီကို V ပုံစံအနေအထားနဲ့ပဲ ကားပြီး မြှောက်လိုက် ချလိုက် လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်စီကို မိနစ် ၃၀ပါ။
(6) prisoner squats ( 30 seconds)
ဒါကတော့ squat ထိုင်ရမှာပါ။ ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကို ခပ်ကျယ်ကျယ် ခြားထားပြီး ကျောကို မတ်မတ်ထားပြီး အောက်ဆုံးအထိ ထိုင်ချပါ။ အပေါ်ကို ပြန်ထတဲ့အခါ တင်ပါးကြွက်သားတွေကို ဖျစ်ညစ်ထားပါ။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သေချာလုပ်ပါ။
စက္ကန့် ၂၀ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ ထိုင်မချတော့ဘဲ ပုံထဲကလို အနေအထားကို တောင့်ခံပြီး ထိန်းပေးရပါမယ်။ ဒီအပိုင်းက တော့ အပင်ပန်းဆုံးပါပဲ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ အားလုံး ပြီးသွားရင် ကြွက်သားတွေကို အနားမပေးပါနဲ့ဦး ။ ထိရောက်မှု ရှိဖို့ အစကနေ ဒုတိယတစ်ကျော့ ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါဦး။
ကဲ….ခုဆိုရင် ဆယ်မိနစ်အချိန်ပေးရုံနဲ့ gym သွားစရာမလိုဘဲ တင်ပါးလှလှလေးကို ရနိုင်ပါပြီ…
Reference links: coachmag.co.uk XHIT DAILY
တဈနတေ့ာမှာ အခြိနျ ၁၀ မိနဈလေး ပေးလိုကျရုံလေးနျော…
တငျးရငျးကဈြလဈြတဲ့ တငျပါးလှလှလေးကို ရဖို့ဆိုတာ လူတျောတျောမြားမြား လိုခငျြတဲ့အရာပါ။တခြို့ကလညျး အဆီပိုတှရှေိပွီး တငျပါးက ပုံပကျြနလေို့ စိတျညဈရသလို တခြို့ကလညျး တငျကို မရှိလို့ စိတျညဈကွရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ သိပါသလား? ကွှကျသားတကျပွီး အဆီပိုမရှိ၊ တငျးရငျးတဲ့ တငျပါးတဈစုံကို အိမျမှာ လကေ့ငျြ့ရုံနဲ့ အလှယျတကူရရှိနိုငျတယျဆိုတာကိုလေ…
ဒီအတှကျ ယောငျးတို့ လိုအပျတာက exercise mapတခု နဲ့ အခြိနျ ဆယျမိနဈ ပါပဲ။Victoria Secret model တှလေို တငျပါးလုံးလုံးလေး ဖွဈဖို့ ထိရောကျမှနျကနျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို မိနဈပိုငျးလေး အခြိနျပေးရုံနဲ့ ဖွဈနိုငျကွောငျး နာမညျကြျော fitness ဆရာမ Rebecca Louis က ပွသထားပါတယျ။
ကဲ…ကွာခြိနျက ဆယျမိနဈတညျးမို့ လိုကျလုပျကွညျ့ရအောငျနျော……
ဒါကတော့ တငျပါးအောကျနားက Hamstring ကွှကျသားတှကေို အဓိက ထားတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။
Hamstring muscles ရှိ တဲ့ နရော လေး တှေ ပါ
Hamstring ကွှကျသားတှဟော အဆီပို မရှိတဲ့ တငျပါးတဈစုံကို ရဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးအရ ဝမျးလြားမှောကျအနအေထားမှာ ပုံထဲကလို ခွထေောကျကို ခလြိုကျ၊ မွှောကျလိုကျ လုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ Hamstring ကွှကျသားတှေ လှုပျရှားသှားပွီး တငျပါးနရောကို သကျရောကျမှုဖွဈစပေါတယျ။
ခွထေောကျတဈဖကျက ဒူးထောကျပွီး နောကျထပျ ခွထေောကျကို မွှောကျရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ။ ဒူးထောကျထားတဲ့ အနအေထားမှာ ခွထေောကျတဈဖကျကို အပွငျထုတျပွီး အမွငျ့ကွီးကို မမွှောကျဘဲ အထကျ၊အောကျ လှုပျရှားပေးနရေပါမယျ။ အထကျ၊ အောကျ လှုပျရှားနတေဲ့အခြိနျမှာ Glute လို့ ချေါတဲ့ တငျပါးကွှကျသားတှကေို ဖဈြညဈထား/ကြုံ့ထား ရပါမယျ။
အနအေထားမှနျဖို့အတှကျ ကြောကို မရမျးမကှေးဘဲ လကျမောငျးကို တငျးတငျးထောကျထားရပါမယျ။။ ဒါဟာ Gluteus muscle တှကေိုဦးတညျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးဖွဈပွီး တဈဖကျကို စက်ကနျ့ ၃၀ စီပါ။
Kicks ဆိုတဲ့ အတိုငျး ကနျရမှာတော့ ကြိနျးသပေါပဲ။ ဒါကတော့ outer glute လို့ချေါတဲ့ အပွငျက တငျပါးကွှကျသားတှကေို ဦးတညျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးဖွဈပွီး core muscle တှကေိုလညျး တငျးရငျးစပေါတယျ။ ခွထေောကျတဈဖကျကို ထုတျ၊ ဘေးကို ကား၊ ပွီးရငျ ဆနျ့ကငျြ့ဘကျ ဦးတညျခကျြကို ကနျထုတျရပါမယျ။ တဈဖကျကို စက်ကနျ့ ၃၀စီပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျနတေုနျးမှာ gluteus muscle တှကေို ကြုံ့ထားဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော..
Related Article >>> တဈနကေို့မိနဈ(၂၀)အခြိနျပေးရုံနဲ့ တဈကိုယျလုံးအခြိုးညီညီအဆီကသြှားစမေယျ့ နညျးလမျး(၄)သှယျ
Glute bridge လကေ့ငျြ့ခနျးဟာ Hamstringနရော နဲ့ တငျပါးကွှကျသားနရောက အဆီပိုတှေ လောငျကြှမျးဖို့ ဦးတညျပါတယျ။ မကျြနှာကွကျကို မကျြနှာမူ၊ ကွမျးပွငျပျေါ ကို လှဲခပြွီး လကျနှဈဖကျကို ဘေးဘကျမှာ သခြော ဆနျ့တနျ့ထားပါ။ ပွီးရငျတော့ ဒူးတဈဖကျကို ကှေးထားပွီး နောကျတဈဖကျကို အပွငျထုတျကာ တငျပါးကို မွှောကျလိုကျ၊ ခလြိုကျလုပျရပါမယျ။
တငျပါးမွှောကျနတေဲ့အခါ တငျပါးကွှကျသားတှကေို တဈစက်ကနျ့လောကျ ဖဈြညဈပွီးမှ အောကျကို ခပြါ။ အနအေထားမှနျဖို့ အတှကျ ကြောပွငျကို ကှေးခွငျး ကောကျခွငျးမရှိဘဲ တညျ့တညျ့မတျမတျဖွဈနဖေို့ သတိထားရပါမယျနျော။ တဈဖကျကို စက်ကနျ့ ၃၀ စီပါ။
ဒါကတော့ ပွငျပက တငျပါး ကွှကျသားအပွငျ သူ့နဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ပေါငျရဲ့ ပွငျပကွှကျသားတှကေိုပါ အခြိုးအစား ပွပွေဈဖို့ ဦးတညျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကို ဘေးဘကျစောငျးပွီး ခွထေောကျကို V ပုံစံ ကှေးထားပေးပါ။ ပွီးရငျ တဈဖကျစီကို V ပုံစံအနအေထားနဲ့ပဲ ကားပွီး မွှောကျလိုကျ ခလြိုကျ လုပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈဖကျစီကို မိနဈ ၃၀ပါ။
ဒါကတော့ squat ထိုငျရမှာပါ။ ခွထေောကျ နှဈဖကျကို ခပျကယျြကယျြ ခွားထားပွီး ကြောကို မတျမတျထားပွီး အောကျဆုံးအထိ ထိုငျခပြါ။ အပျေါကို ပွနျထတဲ့အခါ တငျပါးကွှကျသားတှကေို ဖဈြညဈထားပါ။ ဖွညျးဖွညျးနဲ့ သခြောလုပျပါ။
စက်ကနျ့ ၂၀ကြျောလာတဲ့အခါမှာတော့ ထိုငျမခတြော့ဘဲ ပုံထဲကလို အနအေထားကို တောငျ့ခံပွီး ထိနျးပေးရပါမယျ။ ဒီအပိုငျးက တော့ အပငျပနျးဆုံးပါပဲ။
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ အားလုံး ပွီးသှားရငျ ကွှကျသားတှကေို အနားမပေးပါနဲ့ဦး ။ ထိရောကျမှု ရှိဖို့ အစကနေ ဒုတိယတဈကြော့ ပွနျလုပျပေးလိုကျပါဦး။
ကဲ….ခုဆိုရငျ ဆယျမိနဈအခြိနျပေးရုံနဲ့ gym သှားစရာမလိုဘဲ တငျပါးလှလှလေးကို ရနိုငျပါပွီ…
Tags: butt, exercises, Fitness, gym, Health, Hip, workout